» ‘प्रदेशैभरि डेंगु फैलियो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’
‘प्रदेशैभरि डेंगु फैलियो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’
२७ भाद्र २०७६, शुक्रबार १८:३१
प्रदेश ३ मा डेंगुको संक्रमण बढ्दो छ। प्रदेश तथा संघीय सरकारले डेंगु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो छ।
प्रदेश सरकारले डेंगु संक्रमित बिरामीको उपचार तथा यसलाई नियन्त्रण गर्न के–कस्ता काम गरिरहेको छ? प्रदेश ३ सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालसँग प्रदेश ३ प्रतिनिधि सरिता दाहालले गरेको कुराकानीको सारः
प्रदेश ३ मा डेंगुको अवस्था कस्तो छ?
प्रदेश ३ का १३ जिल्लामध्ये कतिपय जिल्लामा डेंगुको प्रभाव शून्य छ। तसर्थ, प्रदेशैभरि डेंगुको महामारी फैलिएको भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।
प्रदेश ३ का केही जिल्लामा बढी नै यसको संक्रमण देखिएको छ। प्रकोप बढ्दै गएकाले नै नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ‘जागौं र लागौं अभियान’ थालनी गरेको हो।
प्रदेश ३ मा ३ हजार ८ सयभन्दा बढीमा डेंगु संक्रमण देखिएको छ। सिन्धुली,चितवन, मकवानपुर, काठमाडौं, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट आदि जिल्लामा बढी समस्या देखिएको छ।
तथ्यांकअनुसार प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी चितवन, त्यसपछि मकवानपुर र काठमाडौंमा यसको समस्या छ। ललितपुर, काभ्रे, भक्तपुर, धादिङमा पनि यसको संक्रमण उच्च छ। यसबाहेक रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र रसुवा जिल्लामा अहिलेसम्म डेंगु संक्रमण भेटिएको छैन।
डेंगुले प्रकोपको रूप लिइसक्दा रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?
यसबारे प्रदेश सरकार चिन्तित छ। संक्रमित देखिएका जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत् स्थानीय निकाय र त्यहाँका स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, वडास्तरीय टोल विकास संस्था, सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा रोग निदान र रोकथामका पहल भैरहेका छन्।
बढी प्रभावित जिल्ला तथा क्षेत्रमा पर्चा पम्प्लेट, सञ्चारमाध्यमलगायत प्रयोग गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं। यसैगरी, यो रोेग नियन्त्रणका लागि स्थानीय मिडिया, सरोकारवाला र अन्य निकायसँग अन्तक्र्रिया जारी राखेका छौं।
यतिले मात्रै डेंगु नियन्त्रण सम्भव छ त?
हामी यतिमै सीमित छैनौं। धेरै प्रभावित जिल्लामा अझै गहन रूपमा काम गरिहेका छौं। भरतपुर महानगरपालिका र स्वास्थ्य कार्यालयको संयोजनमा बृहत र्‍याली गरेका छौं।
ज्वरोको क्लिनिक नै सञ्चालन गरेका छौं। हेटौंडामा देखिएको डेंगुको लामखुट्टेको सर्वेक्षण गरेका छौ। हेटौंडा र भरतपुरका निजी संस्था सेवाप्रदायकसँग डेंगु उपचारका लागि अनावश्यक शुल्क नलिन र निरन्तर रूपमा स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेका छौं। यसबारे सहमति पनि भएको छ।
प्रभावित सबै जिल्लामा किटबाट डेंगुका शंकास्पद बिरामीको निःशुल्क परीक्षण व्यवस्था मिलाएका छौं। प्रदेशका सबै जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी डेंगु नियन्त्रणका लागि रणनीति बनाई गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छौं।
प्रकोप अझै फैलदो अवस्थामा छ, थप योजना के–के छन् ?
अहिले भैरहेका क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनेछौं। साथै नयाँ अभियान सञ्चालन गर्दै जाने योजना छ।
प्रदेश सरकारले डेंगु नियन्त्रणकै लागि पाँचेहप्ते प्रादेशिक अभियान सुरु गर्दैछ। यो अभियान शनिबारदेखि सुरु हुनेछ।
शनिबार प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा एकै समयमा यो अभियान सुरु हुनेछ। यसअन्तर्गत सबै जिल्लामा सम्पूर्ण जनसमुदायलाई ‘सबै जागौं, सबै लागाै‌, वरिपरि जमेको पानी हटाई डेंगु भगाऔं’भन्ने मूल नारासाथ हातेमालोका लागि आह्वान गर्ने कार्यक्रम छ।
यो अभियानमा सबैले आफ्नो घर, कार्यालय, पसल, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था आदिबाट बासस्थानको कम्तीमा सय मिटर दूरीमा जमेका पानी हटाउनेछन्।
सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, युवा, स्थानीय संघसंस्था, टोल सुधार समितिलगायत सम्पुर्ण महानुभावलाई कात्तिक मसान्तसम्म जारी रहने यो अभियानमा सहभागी भैदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रत्येक शनिबार बिहान सात बजेबाट एक घन्टा ‘खोज र नष्ट गर’ भन्ने अभियानमा लाग्न आग्रह गर्दछु।
यसबाट रोग सार्ने लामखुट्टे, यसका लार्भा तथा फूलहरू नष्ट गर्न सकिने छ। आगामी दिनमा डेंगु नियन्त्रणका लागि सूचनामुलक सन्देश र सामग्री तयार गरी प्रचार–प्रसार र वितरण गरिने छ।
हस्पिटलमा उपचार गराइरहेका डेंगुका बिरामीलाई के गरिरहनु भएको छ? डेंगु परीक्षण किटसमेत नपाएको गुनासो छ?
प्रदेश सरकारमातहतका ६ वटा अस्पतालमा ५० थानका दरले झुल बाँड्न थालेका छौं। हेटौंडा अस्पताललाई झुल दिइसकेका छौं। अन्य अस्पतालमा पनि पठाउने तयारी छ।
डेंगु परीक्षणका किट पर्याप्त नभएको भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यसमा सत्यता छैन। प्रभावित जिल्लामा किटको कमी छैन। हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं।
हामीलाई समस्या केमा छ भने यहाँ स्वास्थ्यकर्मीले हैन बिरामीले किट मागेर हैरान छ। डाक्टरले लक्षणका आधारमा डेंगुको शंका गरेपछि कन्फ्रम हुन किट प्रयोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन।
सामान्य ज्वरो भाइरल भएका बिरामीका आफन्तले समेत डेंगु जाँच गर्न खोज्छन् अनि किट छैन भनेको हुनसक्छ। किटको साँच्चै अभाव छैन।
डाक्टरले लक्षणको आधारमा डेंगु हुँदै हैन भन्दाभन्दै किन परीक्षण गर्नु? परीक्षण गर्न किट भएन भनेर अनावश्यक प्रचार गर्नु जरुरी छैन। किट उपलब्ध छ र, नियमित पनि हुनेछ।
अन्तमा डेंगु नियन्त्रण अभियानबारे के भन्न चाहनहुन्छ?
सबैभन्दा पहिले त डेंगु नियन्त्रणको प्रादेशिक अभियानमा सरिक हुन सबै जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछ । डेंगु कुनै पनि बेला जो कोहीलाई हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
सहरबजार, फाँट, कुनाकाच्चा सबैतिरबाट हामी यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। पाँच साता लगातार यो अभियानमा लागि पर्‍यौं भने लामखुट्टे पूर्ण रूपमा उन्मूलन हुन्छ।
प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी चितवन, त्यसपछि मकवानपुर र काठमाडौंमा यसको समस्या छ।
सरकारले योजना बनाएर, नीति बनाएर मात्रै रोग निदान तथा रोकथाम हुँदैन। जनता स्वयं लाग्नु जरुरी छ। पाइरेथिन नामक केमिकल छरेर मात्रै यो नियन्त्रण हुँदैन।
यसले मानवीय स्वस्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ। त्यसैले हामी केमिकल छर्न प्रोत्साहन गर्दैनौं। यसले लार्भा मर्दैन। लामखुट्टे नै नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमै लागि पर्नुपर्छ ।
दोस्रो कुरा, जो डेंगुप्रभावित भैसक्नु भएको छ, नआत्तिकन मस्त आराम गर्ने, झोलिलो पदार्थ खाने गर्नुपर्छ। यो रोगको उपचार होइन, रोकथाम मात्रै सम्भव छ। यसो हुनाले रोकथामकै लागि प्रादेशिक अभियानमा लाग्नु जरुरी छ। आफ्नो घरआँगन सफासुग्घर राख्ने, कतै पनि पानी जम्नै नदिने अनि पूरा बाहुला भएको लुगा लगाउनेजस्ता रोकथामका उपाय अपनाउनुपर्छ। नेपाल न्युजबाट साभार ।